အခုလိုအမြဲတမ်းလှနေရတဲ့အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်ကို သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင် – Cele Top Stars
အခုလိုအမြဲတမ်းလှနေရတဲ့အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်ကို သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
January 9, 2022 By admin2Celebrity
ခဈြလှစှာသောပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျဘဘေီမောငျဟာဆိုရငျဖွငျ့ ဇာတျကားမြားစှာရိုကျကူးပွီးပရိတျသတျတှေ ရငျထဲနှဈပေါငျးမြားစှာနရောယူထားသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကိုပီပွငျပိုငျနိုငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့လညျး ပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျနျော။
သူမဟာမကွာသေးခငျမှာပဲ အဆိုတျောသားဂနျးနဲ့တရားဝငျလကျထကျထိမျးမွားခဲ့ပွီး သာယာပြျောရှငျတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော.ဘဘေီမောငျ ဟာဆိုရငျ သားဂနျးနဲ့လကျထပျပွီး တဈလအကွာမှာ ပထမဦးဆုံး ရငျသှေးလေးလှယျထားရပွီဖွဈပါတယျနျော။ခဈြတဲ့ပရိတျသတျတှကေလညျး ဗိုကျကလေးနဲ့မကွာခငျမွငျရတော့မယျ့ ဘဘေီကိုရငျခုနျစှာနဲ့တှခေ့ငျြနကွေတာပဲဖွဈပါတယျနျော။
ဒီကတဈခါမှဆိုရငျလညျး ဘဘေီက သူမအမွဲလှနတေဲ့လြှိုဝှကျခကျြကိုပွောပွလာတာပဲဖွဈပါတယျနျော.ဘဘေီက”မောငျကလညျးပုံလေး‌တှလှေအောငျရိုကျပေးတယျမကလညျး အိုကျတငျလေးတှလှေအောငျလုပျတတျတယျကဲအဲ့တော့ အမွဲလှနရေမှာပေါ့” ဆိုပွီးသူမရဲ့လူမူ့စာမကျြနှာမှာရေးသားလာတာပဲဖွဈပါတယျ။တကယျတော့ ဘဘေီတဈယောကျ အမွဲလှနရေတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူသားဂနျးကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျနျော. ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူး တငျရှိပါတယျ။
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ဟာဆိုရင်ဖြင့် ဇာတ်ကားများစွာရိုက်ကူးပြီးပရိတ်သတ်တွေ ရင်ထဲနှစ်ပေါင်းများစွာနေရာယူထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကိုပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူမဟာမကြာသေးခင်မှာပဲ အဆိုတော်သားဂန်းနဲ့တရားဝင်လက်ထက်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.ဘေဘီမောင် ဟာဆိုရင် သားဂန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီး တစ်လအကြာမှာ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးလွယ်ထားရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေကလည်း ဗိုက်ကလေးနဲ့မကြာခင်မြင်ရတော့မယ့် ဘေဘီကိုရင်ခုန်စွာနဲ့တွေ့ချင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီကတစ်ခါမှဆိုရင်လည်း ဘေဘီက သူမအမြဲလှနေတဲ့လျှိုဝှက်ချက်ကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.ဘေဘီက”မောင်ကလည်းပုံလေး‌တွေလှအောင်ရိုက်ပေးတယ်မကလည်း အိုက်တင်လေးတွေလှအောင်လုပ်တတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ အမြဲလှနေရမှာပေါ့” ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမူ့စာမျက်နှာမှာရေးသားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဘေဘီတစ်ယောက် အမြဲလှနေရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသားဂန်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်. ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။
မိန်းမမရှုပ်ဖို့ ဇနီးဖြစ်သူနန္ဒာလှိုင်ကပြောလာတဲ့အပေါ် တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့ ဇေသီဟ